Soo -saaraha iyo Daaqadaha Taxanaha Daaqadda ee ugu Fiican | Dijing
Magaalada ha noqoto mid buuq badan, oo si tartiib ah u xir daaqadaha labada dhinacba, adduunkuna isla markiiba wuu xasilloon yahay. Ka fogow taraafikada mashquulka badan, ka fogow iidaynta, guriga, kuna noqo nuxurka asalka ah. Daaqadda dibaddeeda waxaa ka jira adduun buuq badan, daaqadda gudaheedana diirran oo deggan. Ficilada fudud waxay abuuri karaan jawi ka duwan. Waxay kuxirantahay naqshadeynta taxanaha daaqadda daaqadda. Taxanaha daaqadda daaqaddu waxay leedahay dahaar dhawaaq wanaagsan iyo saamayn kulaylka, iyo dhalada weyn ee ku jirta dhexda ayaa ku habboon iftiiminta. Daaqadda dahaadhu waa qurux iyo jawi, waxaana lala jaanqaadi karaa fikrad kasta oo naqshad casri ah, mood iyo wejiyo badan leh. Ku tiirsanaanta tiknoolojiyadda horumarsan ee Jarmalka iyo aaladaha iyo qalabka casriga ah, daaqadda dahaarka ah ee dhammeystiran waxay leedahay qaab dhismeed adag, oo meesha wax lagu kala gooyaa waa siman oo siman. Saamaynta waxaa laga arki karaa faahfaahinta waxayna ku dadaalaysaa dhammaystirka. Alaabta ceeriin ah waxaa laga sameeyay alaab silicon-magnesium ah oo tayo sare leh, oo leh awood sare iyo cufnaanta hoose, iska-caabbinta kuleylka iyo daxalka, iyo adkaysi iyo xasillooni. Muraayad laba-lakab ah oo dalool leh, xarig caag ah ma xirto geesaha, yaree buuqa, saamaynta dahaarka kulaylka oo aad u fiican, doorashada koowaad ee tayada. Dhexda waxaa ku yaal galaas weyn, kaas oo bixiya iftiin wanaagsan oo heli kara iftiin dabiici ah oo ku filan, kaas oo diirran oo raaxo leh.
1. Aragtida ballaaran: galaas weyn oo dhexda ku yaal, goob ballaaran oo wax lagu daawado, muuqaalka muuqaalka muuqaalka ee daaqadda ka baxsan.
2. Dahaarka dhawaaqa gaarka ah: daaqadaha daaqadaha taxanaha ah ee xargaha caagga ah ayaa la shaabadeeyey si loo abuuro saamaynta dahaarka dhawaaqa ee ugu fiican, kaas oo aad ugu habboon sagxadaha hoose iyo meelaha buuqa badan.
3. Hawo -qaadasho wanaagsan: kuma koobna aagga daaqadda, ku raaxayso dabaysha dabiiciga ah.
4. Nabadgelyo sare: taxanaha daaqadda daaqadda ee la dhisay waxay u fiican tahay ka hortagga xatooyada, waxaana lagu rakibi karaa gacmo-gacmeedyo nooca riixa ama gacmo furayaal si looga fogaado shilalka soo dhaca.
5. Maaddadu waa la sifeeyay: alaab wanaagsan ayaa si taxaddar leh loo xushay, dahaarka silikoon-magnesium waa mid la isku halleyn karo, raagaya oo deggan.
Hore: Taxane daaqad ah oo laba gees leh
Xiga: Taxanaha qolka qorraxda-cad oo hufan